४ महीनामा वैदेशिक व्यापार | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण ४ महीनामा वैदेशिक व्यापार
on: १९ मंसिर २०७५, बुधबार ०५:५८ लेख | दृष्टिकोण
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को प्रथम ४ महीनाको कुल वैदेशिक व्यापारमा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको प्रथम ४ महीनामा रू. ४ खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ जुन गतवर्षको सोही अवधिमा भएको रू. ३ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको तुलनामा करीब ३६ प्रतिशतले बढी हो ।
निर्यातमा भने तुलनात्मक रूपमा सुधार आउन सकेको छैन । गतवर्ष यस अवधिमा रू. २६ अर्ब ३८ करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष रू. २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको निर्यात भई ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयातमा भएको ३६ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा यो निकै न्यून हो । व्यापारघाटा यस वर्ष पनि निकै बढेको छ । गतवर्षको तुलनामा करीब ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
चालू आवको प्रथम ४ महीनामा मूल्यका दृष्टिले सबैभन्दा बढी मूल्यको आयातित मालवस्तुमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यसको आयात मूल्य रू. ७७ अर्ब ३२ करोड रहेको छ भने गतवर्ष आयात मूल्य रू. ४५ अर्ब ५८ करोड रहेको थियो ।
वृद्धिदरका हिसाबले करीब ७० प्रतिशत आयातमा वृद्धि भएको छ । प्रमुख पाँच आयातित मालवस्तुमा योसँगै पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला (आयात मूल्य रू. ४५ अर्ब ५८ करोड), फलाम तथा इस्पात (आयात मूल्य रू. ५२ अर्ब ६५ करोड), मेशिनरी तथा सम्बन्धित उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ३७ अर्ब १० करोड), सवारीसाधन (आयात मूल्य रू. ३७ अर्ब ९ करोड), र विद्युतीय उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. २८ अर्ब ४७ करोड), रहेका छन् । यी आयातित पाँच वस्तुको गतवर्षको आयातसँगको तुलनात्मक तथ्याङ्कीय स्थिति ग्राफमा देखाइएको छ ।
चालू आवको प्रथम ४ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यातित मालवस्तुमा कृत्रिम रेसाबाट निर्मित धागोको निर्यात रू. २ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । यसको निर्यात गतवर्षको यसै अवधिमा रू. २ अर्ब ४७ करोडको भएको थियो । वृद्धिदरका हिसाबले करीब १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दोस्रोमा रू. २ अर्ब ८३ करोडको कार्पेट तथा भुइँमा बिछ्याउने अन्य कपडा (करीब १७ प्रतिशतले वृद्धि) , तेस्रोमा रू. २ अर्ब ७९ करोडको चिया कफीको निर्यात (निर्यातमा केही ह्रास आएको) आदि रहेका छन् । करीब ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रमुख पाँच निर्यात भएका मालवस्तुको तुलनात्मक तथ्याङ्कीय स्थिति ग्राफमा देखाइएको छ ।
चालू आवमा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन सवारीसाधनको आयातबाट भएको छ । चालू वर्षमा यसबाट रू. ३७ अर्ब ३५ करोड मूल्यको राजस्व सङ्कलन भएको छ । गतवर्षको तुलनामा करीब २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला आयातबाट सङ्कलित राजस्व रू. १९ अर्ब ८२ करोड गतवर्षको रू ११ अर्ब १७ करोडको सङ्कलित राजस्वको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि (करीब ७७ प्रतिशत) मान्न सकिन्छ । त्यस्तै राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले तेस्रो स्थानमा रहेको फलाम तथा स्पात करीब ५६ प्रतिशतले, चौथो स्थानको विद्युतीय उपकरण ४६ प्रतिशतले तथा पाँचौ स्थानको प्लाष्टिकजन्य पदार्थ आयातबाट सङ्कलन हुने राजस्वको वृद्धि ४४ प्रतिशतले भएको छ ।